Ingersoll Rand Air Oil sahluli - China Airpull (Shanghai) Icebo lokucoca ulwelo
Le Ingersoll Rand ujije isiguquli abezingcwalisile umahluli oyile umoya usebenza ifayibha yeglasi ultra-ocoliweyo, yenziwa yi-American hv okanye Lydall Company. Iyilelwe ukuba ukususa ubuncinane 99,9% le mixube yeoli anomoya ukusuka ngomoya. Ukongeza, i ezintsha kuphuhliswa-component ezimbini ingcina leyo iza ephakamileyo amandla lib, isetyenziselwa ukuvumela umahluli ukusebenza ngokuqhelekileyo phantsi lobushushu ngasentla 120 ℃.
Kwakhona, le hlobo njengomahluli oyile lomoya angaba zangaphandle okanye eyakhelwe-ngaphakathi uhlobo. Phantse 20 iminyaka yamava mveliso, inkampani yethu uqhelene amawaka kwiteknoloji yemveliso. Oko kukuthi, singakwazi ukunikela inkonzo ophezulu-grade OEM. Kwakhona lungayilwa umahluli ezisetyenziselwa Screw isiguquli nayiphi lophawu, ngokomzekelo, Atlas Copco, Sullair, Fusheng, Thelekisa, njl
Le imveliso usebenzisa ifayibha iglasi micron ukwahlukanisa ioli anomoya ukusuka umoya. Ke amathontsi oyile enkulu esidibanise ukusuka ioli anomoya ziya eziyintlanganisela phantsi kuchaphazela womxhuzulane. Okokugqibela, i-oyile aqokelelwe baya kubuyela kumgca oyile le isiguquli. Kule nkalo, le ukungcola micron kunciphisa ukusetyenziswa ioli isiguquli.
2. I-Content-Oli emva nowakwakho: ≤5 PPM
3. Kwimeko ukuba nethontsi xi akukho ngaphezulu kwe 0.1MPa, umahluli oyile ingasetyenziswa iiyure ubuncinane 4,000.
Bathi: i parameters ngasentla afunyanwa phantsi kweemeko kuxinzelelo yokusebenza rated zidlule rated. Ngaphandle koko, iqondo eliphezulu akukho ngaphezulu kwe-120 ℃. Kwaye ke ioli eGudegoda ukuthambisa ajikeleze olawulwa GB / T7631.9-1997 iyasetyenziswa. Ngaphambi kokuba wokwahlula, isiqulatho ioli akukho ngaphezu 3000ppm.
Centrifugal Oil isahlukanisi | Bokushicilela Screw isiguquli eyongezwayo | Isiguquli yoMabi
Previous: Mann Oil Amacebo okucoca
Okulandelayo: Atlas Copco Air Oil sahluli
Abac Icandelo Yiba nenceba
isiguquli icebo lokucoca ulwelo ke Umahluli
Almig Part Yiba nenceba
Alup Icandelo Yiba nenceba
Atlas Copco Part Yiba nenceba
Boge Icandelo Yiba nenceba
Chicago Pneumatic Icandelo Yiba nenceba
Compair Oli isahlukanisi
Compair Icandelo ungamyeki
isiguquli lokucoca Ke Umahluli
Elgi Oli isahlukanisi
Elgi Icandelo Yiba nenceba
Icebo lokucoca ulwelo Ke Umahluli Factory
Icebo lokucoca ulwelo Ke Umahluli Sale
icebo lokucoca ulwelo ke Umahluli nomakhi
icebo lokucoca ulwelo ke Umahluli Supplier
Fusheng Oli isahlukanisi
Fusheng Icandelo Yiba nenceba
Gardner Denver Oil Umahluli
Gardner Denver Icandelo Yiba nenceba
Hitachi Oil isahlukanisi
Hitachi Icandelo Yiba nenceba
Ingesoll Rand Oli isahlukanisi
Ingesoll Rand Icandelo nanceba
Kaeser Oli isahlukanisi
Kaeser Icandelo Yiba nenceba
Kobelco Oli isahlukanisi
Liutech Oli isahlukanisi
Mann Oil isahlukanisi
Mitsui Seiki Oli isahlukanisi
Mitsui Seiki Icandelo Yiba nenceba
Quincy Oli isahlukanisi
Sullair Oli isahlukanisi
Worthington Oli isahlukanisi
Amacebo okucoca Ingersoll Rand Air
Amacebo okucoca Atlas Copco Air